Analysis Archives » Myanmar Peace Monitor
An Analysis of the World’s Focus on Myanmar – ENG
The Myanmar coup regime has drawnaseries of condemnations and denunciations from most of the countries around the world since the onset of the coup on February 1st, 2021. However, other groups such as China, Russia and ASEAN were witnessed to keep remarkably silent about the matter.
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် မြန်မာ့အရေး အလေးပေးမှုကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်၊ စစ်အာဏာသိမ်းမှုစတင်ကတည်းက ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစု၏ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအပေါ် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြစ်တင်မှုများ ရရှိသော်လည်း တရုတ်၊ ရုရှားနှင့် အာဆီယံကဲ့သို့သော နှုတ်ဆိတ်နေသည့် အစုအဖွဲ့များကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းမှုအား ဆန့်ကျင်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြသော မြန်မာပြည်သူလူထုအနေဖြင့် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများ၊ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုများကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ၊ နေ့ညစဉ်ဆက် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါတိုင်း အမေရိကန်အပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၏ ဖေးမကူညီမှုများကို မျှော်လင့်လေ့ရှိပါသည်။
Does the NCA still exist
စစ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၏လားရာ
ကချင်တစ်ကျော့ပြန်စစ် နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကို ဆန်းစစ်ခြင်း
Military-Political Rivalries in Rakhine State and Chin State and the future of Myanmar